Intsimi YesiCreole SaseHaiti EDominican Republic | Incwadi Yonyaka Ka-2015
Ukushumayela Kummandla Othetha IsiCreole SaseHaiti
Intsimi yabantu abathetha iSpanish ibisoloko ityebe kakhulu. Noko ke, ekuhambeni kwexesha, kweli lizwe kuye kwafika abantu abathetha ezinye iilwimi yaye nabo bebenomdla kakhulu kwisigidimi sethu esinik’ ithemba. Kwilizwe elingummelwane iHaiti, olona lwimi luthethwayo sisiCreole saseHaiti. Nangona kukhe kube nzima phakathi kweDominican Republic neHaiti, amawaka abantu baseHaiti asebenza eDominican Republic, yaye kutshanje, baye banda ngendlela engathethekiyo abantu abasebenza kweli.
Kangangeminyaka, abantu abathetha isiCreole saseHaiti abanomdla enyanisweni babethunyelwa kumabandla eSpanish ukuze bafumane uncedo lokwazi iBhayibhile. Noko ke, ukuze bafumane uncedo olungakumbi, ngo-1993 iQumrhu Elilawulayo layalela isebe laseGuadeloupe ukuba licele oovulindlela abakhethekileyo abakwintsimi yalo ukuba baye kunceda kwintsimi yabantu abathetha isiCreole saseHaiti eDominican Republic. Phakathi kwezibini ezintathu ezafuduka ngokuzithandela yayinguBarnabé noGermaine Biabiany. UBarnabé uthi: “Ekuqaleni sasineencwadana ezimbini kuphela zolwimi lwesiCreole saseHaiti. Zonke ezinye yayizezesiFrentshi, ngoko kwakufuneka siguqulelele isiFrentshi sisise kwisiCreole saseHaiti.”
NgoJanuwari 1996, kwakukho abavakalisi abasithoba kwisixeko saseHigüey, belishumi kwesaseSanto Domingo ababenomdla wokunceda iqela labavakalisi abathetha isiCreole saseHaiti. Ngoko, kwisixeko ngasinye kwasekwa iqela yaye ekuhambeni kwexesha loo maqela aba ngamabandla. Kodwa loo mabandla avalwa kuba kwabonakala ukuba abantu abaninzi baseHaiti babefuna ukufunda iSpanish, ngoko babesiya kwibandla leSpanish. UBarnabé uthi: “Sathetha nabazalwana abakwiSebe Lenkonzo, yaye bacebisa ukuba okwangoku sikhe siyeke ukusebenza kwintsimi yesiCreole saseHaiti.”
Intsimi YesiCreole SaseHaiti Iyavuselelwa
Ngo-2003, iQumrhu Elilawulayo lacela abathunywa bevangeli, uDong noGladys Bark, ukuba baye kusebenza kwintsimi yesiCreole saseHaiti eDominican Republic. Basebenza kwintsimi yaseHigüey kangangeminyaka emibini yaye apho babona indlela abantu abanomdla ngayo. NgoJuni 1, 2005, kwasekwa ibandla lesiCreole saseHaiti. UDong Bark, uBarnabé Biabiany nomnye umthunywa wevangeli uSteven Rogers, batyhutyha lonke eli bekhangela abantu abanomdla abathetha isiCreole saseHaiti.
Umsebenzi wawuhamba kakuhle, ibe kwasekwa amabandla angakumbi. NgoSeptemba 1, 2006, kwasekwa isiphaluka sokuqala solwimi lwesiCreole saseHaiti. Eso siphaluka sasibunjwa ngamabandla asixhenxe namaqela amabini, yaye umveleli waso yayinguBarnabé Biabiany.
Kwiminyaka kamva, kwacelwa abathunywa bevangeli abaliqela ukuba baye kusebenza kwintsimi yesiCreole saseHaiti eDominican Republic. Kwafika namanye amatsha-ntliziyo amaninzi avela eKhanada, eMerika, eYurophu nakwezinye iindawo. Kwacelwa iqela labazalwana abafanelekayo ukuba bafundise abazalwana noodade abaphuma kwamanye amazwe nabasekuhlaleni isiCreole saseHaiti.
Abantu abaninzi xa besiva umntu ongengomHaiti ethetha isiCreole saseHaiti bavele bacinge ukuba uliNgqina likaYehova
Ekubeni bebaninzi abantu baseDominican abafunda isiCreole saseHaiti, abantu baseHaiti banomdla eBhayibhileni. Ngoku, xa umvakalisi waseDominican eshumayeza umntu othetha isiCreole saseHaiti, uyakhululeka aze aphulaphule ngomdla. Baninzi abazalwana abaye bafunda olu lwimi, kangangokuba xa abantu besiva umntu ongengomHaiti ethetha isiCreole saseHaiti bavele bacinge ukuba liNgqina likaYehova.
Ukuze ubone indlela okunemiphumo emihle ngayo ukuba nomdla kumntu onemvelaphi eyahlukileyo kweyakho, khawuve lo mzekelo wodade onguvulindlela waseDominican owayefunda isiCreole saseHaiti. Ngoxa wayesentsimini, wathetha nesibini saseHaiti esasinomdla. Kamva wabuyela kuso ukuze aqalise isifundo seBhayibhile. Uthi: “Xa ndifika, ndaphuza umfazi esidleleni, njengoko babebulisana njalo abafazi baseDominican Republic. Lo mfazi walila. Ndambuza, ‘Yintoni sisi?’ Wathi, ‘Ndiyaqala ukuphuzwa ngumntu xa endibulisa kuyo yonke le minyaka ndihlala kweli lizwe.’”
Indlela uYehova awakusikelela ngayo ukuzibhokoxa kwabazalwana yabangela ulwando olukhulu kakhulu. NgoSeptemba 1, 2009, kwakukho amabandla ayi-23 esiCreole saseHaiti namaqela ayi-20, ngoko kwasekwa isiphaluka sesibini. Inani lababekho kwiSikhumbuzo sika-2011 labonisa ukuba kuseza kubakho ulwando. Ngokomzekelo, abavakalisi abayi-11 bedolophana yaseRío Limpio, zange bakwazi ukuzibamba yimincili xa eSikhumbuzweni kwabakho abantu abayi-594. Xa kwagqitywa ekubeni iSikhumbuzo sibe kwidolophu yaseLas Yayas de Viajama, apho kwakungekho bavakalisi, baba yi-170 abantu abezayo. Kwathi kusiba nguSeptemba 2011, kwabe kukho amabandla ayi-33 namaqela ayi-21 kwintsimi yesiCreole saseHaiti. Ngoko, ngo-2012 kwaphinda kwasekwa esinye isiphaluka.
Isebe laseDominican Republic liye lasebenzisana nelaseHaiti ukuze kuqeqeshwe abazalwana abahlala kuloo mazwe. Kwaqhutywa iiklasi ezintlanu zeSikolo SeBhayibhile Sabazalwana Abangatshatanga neeklasi ezine zeSikolo SeBhayibhile Sezibini EzingamaKristu ngesiCreole saseHaiti.
Ukufunda isiCreole saseHaiti
Ulwando Kwintsimi YesiCreole SaseHaiti
Ukususela ngo-2005 ukusa ngo-2014